Maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Gobolka Hiiraan oo xukunno kala duwan ku riday askar – Radio Muqdisho
Maxkamada ciidanka Qalabka sida ee Soomaaliya faraceeda Gobolka Hiiraan ayaa Xukunno ku riday 10 Askari oo ka tirsan Ciidanka Qalabka sida, kuwaasi oo xeer ilaalinta Maxkamadda ay dambiyo kala duwan ku soo eedeysay.
Xeer ilaalinta ayaa qaar ka mid ah askarta ku eedeysay inay fal dil ah ka geysteen gudaha magaalada Beladweyne ee xarunta Gobolka, halkaasi oo ay ka fuliyeen howlgallo lagu baacsanayay haraadiga Al-Shabaab, iyagoo intii ay socotay howlgalka ay ku dileen qof rayid ah oo aan ka mid ahayn kooxdii ay baadi goobayeen.
Sidoo kale ciidamada ayaa qaarkood lagu eedeyay inay hub si sharci darro ah ugu siteen gudaha magaalada Beladweyne, halka kuwa kalena ay sameeyeen amar diiddo.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka ee Gobolka Hiiraan Ibraahim Muxumed Geeddi ayaa ku soo waramay in ragga falka dilka ah lagu helay ay Maxkamadda ku xakuntay inay bixiyaan diyaha ninkii rayidka ahaa ee ay dileen, halka kuwa kalena lagu xakumay xabsi ciidan oo isugu jirta lix bil ilaa iyo sanad.
Maxkamadda ayaa sheegtay in ciddii aan ku qanacsaneyn ay xakunka ka qaadan karaan racfaan.